192.168.8.200 - Login Login - Username sy ny tenimiafina
Ny adiresy IP 192.168.8.200 natokana hidirana amin'ny efijery admin an'ny router. Ity IP ity, ary koa ny hafa toa ny 192.168.1.11, 192.168.8.1, ary 192.168.168.1, dia fantatra ho an'ny IP router. Ao amin'ny literatiora, fantatra ihany koa amin'ny hoe "Default Gateway IP."
Ny adiresy IP dia manomboka amin'ny 192.168.0.0 ka hatramin'ny 192.168.255.255
Adiresy IP toa 192.168.0.0 ary koa 192.168.255.255 dia ampahan'ny tambajotra eo an-toerana nofaritana Local Area Network LAN. Raha vantany vao mifampiresaka ny gadget nefa tsy mandeha amin'ny Internet dia namboarina io tambajotra manokana io. ny 192.168.8.200 adiresy mahita toerana tafakambana amin'ny boaty internet, solosaina amin'ny LAN, na gadget samihafa ao amin'ny tamba-jotra.
Midika tsy misy fampiasa IP izy izay tazomina ho an'ny router tsy misy tariby na modem. Ao amin'ny bara adiresy amin'ny alàlan'ny fitily 192.168.8.200 ao amin'ny browser dia hahazo ny fidirana amin'ny sisintanin'ny admin an'ny router ianao. Ny ankamaroan'ny 192.168.8.200 dia ampiasain'ny mpanamboatra toa an'i Asoka. Tsy ny IP mahazatra ho an'ny router fotsiny izany. Betsaka ny IP isan-karazany ohatra 192.168.2.1, 192.168.0.1, or 192.168.1.1 izay nampiasaina tamin'ny fidirana amin'ny tontonana fanaraha-maso ny tsipika fahazoan-dàlana Access Point. Ity IP mahazatra ity dia antsoina hoe Default IP Gateway.
Raha hamerina ny PW ho an'ny 192.168.8.200
Ny sisa ataonao dia ny mamerina ny modem. Azo atao mora izany amin'ny alàlan'ny fanosehana ny switch reset eo an-damosina na eo am-pototry ny modem. Raha nitazona ny switch kely ianao nandritra ny 20 segondra, (mila ataonao amin'ny alàlan'ny paosin-nify io, dia averina amin'ny toeran'ny orinasa ilay modem.
Raha tsorina dia tsy maintsy tadidinao fa rehefa ny modemanao dia mamerina, ho very ny fifandraisana an-tserasera. Noho izany dia nanoro hevitra anao ny handray ny fanampian'ny manam-pahaizana manokana ny fomba.
Raha vitsy ny fampahalalana azonao, dia mamporisika anao izahay tsy maintsy maka fanampiana amin'ny olona iray manana izany traikefa izany.
The 192.168.8.200 Ny adiresy IP dia atolotry Consortium GARR, an'ny CDIR 192.167.0.0/16. Manoratra fotsiny 192.168.8.200 na amin'ny tsindrio eo amin'ny switch dia manaova traceroute.
Raha vantany vao manaiky ny router ny adiresy 192.168.8.200, dia azo jerena ny pejin-tranonkala fitantanana amin'ny Internet.
Midira https://192.168.8.200 ho an'ny fanokafana ny interface interface, ao amin'ny bara adiresin'ny browser. Amin'ny tranga hafa dia ampirisihina hampiasa ny solonanarana izay mamantatra ilay fitaovana ao anaty tamba-jotra.
Username & Password ho an'ny 192.168.8.200
fijangajangana Admin Admin
fijangajangana Admin (Tsy misy)
fijangajangana Admin tenimiafina
Sokajy routerips Post Fikarohana
© 2021 192.168.8.1 • Namboarina miaraka GeneratePress